सबै द्वारा मान्यता प्राप्त छ - घर पाक धेरै tastier सबैभन्दा विस्तृत निर्मित सामान छ। त्यसैले एक साँझ gulls SIP गर्न सुखद तिनीहरूलाई: विशेष गरी एक ठाउँमा कुकीहरू र केक हो! तर, समय र कहिले काँही व्यञ्जनहरु को धेरै लिन्छ। तर मिठाईहरू बीचमा घर व्यञ्जनहरु सधैं मुखमा तयार र चाँडै भएकाहरूलाई, र पग्लिने चयन गर्न सक्नुहुन्छ।
उदाहरणका लागि, एक केक, "Formic हिल"। यस नुस्खा एकदम सरल छ। प्रत्येक परिवार, निश्चित लागि, यहाँ यस्तो मीठो अप मार केही विकल्पहरू बाँकी छन्। यो जस्तै सजिलो देखिन्छ: नूनिलो वा स्वाद नभएको हुन सक्छ, बिस्कुट "galettes" को एक पाउन्ड किन्न। तोड वा सानो टुक्रा तिनीहरूलाई काट्नु। दुई बवासीर मा विभाजित। गाढा दूध र चकलेट को एक जार लिनुहोस्। एक पानी स्नान मा पिघल एक बार र त्यसपछि आधा संक्षिप्त पोख्नुहोस् दूध। यस मामला मा, तपाईं "कमिला हिल" (नुस्खा improvisation लागि अनुमति दिन्छ) गाढा प्राप्त। अँध्यारो संग - एक कचौरा मा, कुकी सेतो क्रीम संग अन्य मा मिश्रण। अर्को, दुई मिश्रण जडान र राम्रो मिश्रण। खाना फिलिम, यो एक पहाडी को आकार दिने धेरै राख्नुहोस् - आफ्नो केक तयार "कमिला हिल" छ कि! यस नुस्खा केही घण्टा फ्रिज मा मिठाई राख्न सुझाव, त्यसैले यसलाई राम्रो तरिकाले स्थिर छ।
उबला गाढा दूध संग केक
अर्को स्वादिष्ट र सरल वैकल्पिक व्यवहार। उहाँलाई लागि, तपाईं को बिस्कुट "चेस" प्रकार वा मकै, जई वा अन्य सर्टकेक एक पाउन्ड संग बारे 5-6 पैक आवश्यक हुनेछ। अर्डर पनि cloying "कमिला हिल" प्राप्त गर्न मा, नुस्खा मीठो र ताजा प्रजातिहरू संयोजन गर्न सल्लाह दिएको छ। एक क्रीम आवश्यक फेरि संक्षिप्त दूध छ। जार एक हत्येदार बरतन मा खन्याउन र यो thickens र भूरा रङ्ग प्राप्त गर्दैन सम्म कम गर्मी को माथि महाराज। तपाईं वेनिला एक झोला गंध थप्न सक्नुहुन्छ। को क्रीम ठंडा सम्म, बिस्कुट भङ्ग। त्यसपछि मा पहिले नै वर्णन अल्गोरिदम (सबै नै "कमिला हिल") अगाडि बढ्नुहोस्। फोटो संग नुस्खा संलग्न। crumbs वा सिलोफन को माध्यम, वा (टाँसिएको जोगिन) पानी मा भिगो बस हात द्वारा गाढा दूध मिश्रण, एक केक गठन, यो एक पकवान राख्नु र चिसो यसलाई पठाउन - स्थिर। एक वास्तविक कमिला बस्ने घर छर्कनु मिठाई थप समानता लागि अफीम pounded।
अघिल्लो नुस्खा तपाईं कुकीहरू देखि "कमिला हिल" यदि पहिले नै यो संस्करणमा तपाईं सीधा केक के गर्न छ समाप्त। परीक्षण पीठो, 1 अन्डा, घिउ र खट्टा क्रीम को एक बिट को एक पाउन्ड लिनेछ लागि - र चिनी एक कप (यो माग लिन आटा बनाउन सुन्दर, तर लोचदार बाहिर गरिएका)। तेल (र margarine वा सुंगुरको बोसो हुन सक्छ), टुक्रा मा, काट्नु चीनी संग दल्नु। नुन को एक चुटकी फेंक - यो कुकीहरू को मिठास बन्द सेट। grated अदुवा र दालचिनी एक चिम्टी थप्नुहोस्। आटा हथौडा अन्डा, को क्रीम खन्याउन चीनी मिश्रण राख्न र आटा मुछ्नु। एक बल यसलाई रोल, सिलोफन मा र्याप र फ्रिज मा आधा एक घण्टा मा राखे।
रूपमा थप केक, "Formic हिल" तयार? नुस्खा प्रदान गर्दछ वा बन्द आटा को टुक्रा कटौती र एक ठूलो grater तिनीहरूलाई RUB र तिनीहरूलाई अलग गर्न, वा मासु Grinder प्रयोग पीठो खन्याउन। यो अन्त गर्न, पातलो तहहरू सानो काटन, एक मासु Grinder मार्फत पारित गर्दै छन् "कीडे।" एक greased पाक ट्रे मा समान रूप सबै टुक्रा र तातो ओवन मा पठाउन र 20 मिनेट (सुनको खैरो सम्म) को लागि Bake। तिनीहरूलाई शांत। त्यसपछि सबै कुकी crumble बाहिर बारी हुनेछ। को गाढा दूध मा, कोका चियाको spoonful (पाउडर) थप्न र कागति को रस को एक सानो बिट, थोपा को बस एक जोडी हुन सक्छ।
हलचल को केक मा मिश्रण खन्याउन, मुछ्नु। स्थिर र चिसो, - एक mound बनाउन!
जाम संग केक
"कमिला पहाडी" को क्रीम मात्र होइन संक्षिप्त दूध, तर सिरप उपयुक्त छ रूपमा लागि। मुख्य अवस्था - यो कुकीहरू impregnate पर्याप्त थियो। र यदि धेरै केक त्यो पसलहरूमा, तपाईं थप नरमररुपले किन्न आवश्यक छ। सबै को सबै भन्दा राम्रो उपयुक्त बिस्कुट "लेमन" वा "चिया लागि" छ। ले सिरप चेरी, नासपाती र currant जाम भर्नको लागि। खूबानी puree रूपमा उपयुक्त। र अफीम बेवास्ता छैन, यो मिठाई को मूल स्वाद दिन हुनेछ।
बिस्कुट टुक्रा मा तोड्न। एक सानो नरम घिउ र त्यसपछि जाम 100 ग्राम थप्नुहोस्। इच्छित आकार गर्न केक दिन र राम्रो भिजेको दिन।
केही मिनेटमा केक
हाम्रो आस्तीन, पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री माथि रोल, र प्लेट गर्न बन्न! यो "पहाडी" Bake गर्न (प्रसंगवश, केक को दोस्रो नाम - "कमिला बस्ने घर"), तपाईंलाई आवश्यक:
पीठो -3कप;
चीनी - माप आधा (आधा ग्लास);
मक्खन (वा margarine) - 200 ग्राम;
अखरोट - आधा कप (Mince) र आफ्नो चीनी अर्को2चमचा थपियो;
कोका को साथै एक बिट।
मसला को, अलैंची र वेनिला को आधा चिया चम्चा लिन। पीठो चाल्नु, को अन्डा drive, चीनी, अलैंची, वेनिला र कोका मा छिडकना। राम्रो मिश्रण र एक चिकनी पेस्ट मा मुछ्नु। रोल shortcakes मोटाइ मा सेन्टिमिटरले र केही मिनेट लागि ग्याँस मा एक कराइ तिनीहरूलाई Bake। त्यसपछि तोड, उसिनेर गाढा दूध peremazhte, "वास्तविक" केक गरौं। सेवा गर्नु अघि, कसा भयो पागल र चिनी संग "पहाडी" छिडकना।
र अन्तमा, थप एक स्वादिष्ट व्यञ्जनहरु "कमिला पहाडी" - मह संग। यसलाई आवश्यक थियो:
पीठो - 2.5 कप;
अन्डा -5टुक्रा;
नुन - चिम्टी;
मह - 450-500 ग्राम;
खाना पकाउने तेल (frying)।
हावा बन्ने पीठो चाल्नु। अण्डा, नुन राखेँ र आटा मुछ्नु। एक बल रोल, तौलिया संग कवर र आधा एक घण्टा उहाँलाई "आराम" गरौं। त्यसपछि पातलो तहहरू उतारना, तेल मा धर्काहरू र भुट्नु मा कटौती गरिएको छ। तपाईं अतिरिक्त बोसो अवशोषित गर्न कागज तौलिया मा कुकीहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि एक सानो बिट यो जोश गर्न सक्नुहुन्छ, मह ढल्छ। त्यहाँ किसमिस हो भने, एउटै दिशा मा छिडकना। अब बाहिर राम्रो मिश्रण, को "कमिला बस्ने घर" के, को बिस्कुट राख्नु। धुलो चिनी र जीरा यसलाई छिडकना।
केक लागि सजावट
यो "पहाडी" उपस्थिति मुद्दा मा अलग अलग हुन सक्छन् भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। तपाईं fudge पकाउन र यो मिठाई खन्याउन गर्न सक्नुहुन्छ। वा सुकेको फल टुक्रा संग चकलेट क्रिम व्यवहार गर्छन्। "स्लाइड" क्यान्डी पाउडर संग छिडकना। वा चकलेट grated। अर्को मूल विकल्प -, केक जेली खन्याउन ताजा जामुन राखे। र हरेक समय आफ्नो मिठाई एक, मूल असामान्य र धेरै स्वादिष्ट हुनेछ।
ब्यागेल्स: को margarine लागि निर्धारण। को संरचना, तयारी र समीक्षा विधि
पकौडी लागि कीमा बनाएको मासु र आटा नुस्खा को संरचना
ओवन मा एक कद्दू मा मासु: एक मूल खाने खाना पकाउन कसरी?
ओवन मा सुखा आलु संग ससेज: सरल व्यञ्जनहरु
प्रार्थना "ताकि सबै चीज ठीक हुनेछ।" के यो अवस्थित छ?
प्रोफेसर Moriarty अभिनेता
सोडा को अद्वितीय चिकित्सकीय गुण
"Laurent": आधुनिक फर्नीचर
पकाउने को रहस्य: दूध संग प्यानकेकहरू कसरी खाना पकाउनु
जूलिया कोभचुकको जीवनी। ताराको सबै रहस्य
मकर - अन्य संकेत संग अनुकूलता
डेइमन जस्तै उपकरण एक डिस्क छवि बनाउन: चरण पुस्तिका द्वारा चरण
गुडिया लागि वस्त्र होम थियेटर
के डिसेम्बर 20 व्यावसायिक छुट्टी रूस मा?
आँखा खस्छ लेन्स: प्रयोग, सुविधा र निर्माताहरु लागि अवलोकन, निर्देशन